Haaland oo ceebeystay weerarka kooxda Real Madrid… (Benzema + Bale + Hazard) – Gool FM
Haaland oo ceebeystay weerarka kooxda Real Madrid… (Benzema + Bale + Hazard)
(Madrid) 14 Maaajo 2020. Tan iyo markii kooxda Real Madrid ay iibisiy Cristiano Ronaldo kaasoo ku biiray Juventus, waxay kooxda reer Spain la tacaalleysa dhibaato gool dhalis yaraan ah.
Weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ayaa goolal ku ceebeystay weerarka kooxda Real Madrid, isagoo dhaliyay goolal la simman isku darka weerarka Los Blancos goolasha ay dhaliyeen.
Laacibka reer Norway oo bartilmaameed u ah kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid ayaa dhaliyay afartan gool xilli ciyaareedkan kaddib kulammadii uu u ciyaaray kooxaha RB Salzburg iyo Borussia Dortmund.
Kaliya Karim Benzema ayaa kusoo dhow dhanka goolasha kaasoo tirsanaya 19 gool.
Gareth Bale ayaa shabaqa soo taabtay kaliya saddex jeer xilli ciyaareedkan, halka saxiixii xagaaga ee Luka Jovic uu isna labo goo loo qura laga haayo, Eden Hazard oo si adag ku billawday waqtigiisa Santiago Bernabeu ayaa isugna kaliya hal gool xarriiqday.
Balse taas baddelkeeda waxaa goolal fiican dhaliyay da’yarka reer Brazil ee Rodrygo Goes oo dhaliyay toddobo gool.
Si kastaba ha ahaatee, isku darka weerarka kooxda Real Madrid ayaa dhaliyay 40 gool xilli ciyaareedkan dhammaan tartammada, halka Haaland isaguna uu dhaliyay 40 gool xilli ciyaareedkan.
Puyol iyo Pique oo isugu tagay Casillas, iyo wixii ku dhex maray sawir uu goolhayihii hore ee Real Madrid soo dhigay Isntagram-ka